Misy ankehitriny ny fanamby amin'ny andro yoga | Avy amin'ny mac aho
Yoga Day Challenge izao dia misy
Androany dia afaka mahazo fanamby Apple Watch vaovao mifandraika amin'ny fahasalamana ianao. Araka ny efa fantatrareo, Andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga androany i Apple ary nankalaza an-taonany maro azy tamin'ny medaly vaovao i Apple tamin'ny fanaovana 20 minitra an'ity hetsika ity na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Herintaona indray i Apple dia hanome ny medaly sy ny sticker ny fanamby mitranga anio 21 jona ary izany dia nanjary fanamby mahazatra nandritra ny telo taona.
Amin'ity tranga ity, toy ny tamin'ny taona lasa, ny fanamby dia misy manaova fampihetseham-batana yoga mandritra ny 20 minitra na mihoatra amin'ny fisoratana anarana azy amin'ny fampiharana fampiofananaTsotra io fanamby io ho an'ireo izay manao yoga tsy tapaka, fa isika izay tsy zatra manao an'ity karazana hetsika ity dia mety ho tafiditra amin'izany noho io fanamby io.
Ny ataon'ireo mpampiasa sasany dia ny mampihetsika ny fiofanana yoga ary manao fiofanana hafa fa ny tena mahafinaritra eto dia ny fampiharana fomba vaovao sy fianarana zava-baovao. Mazava fa tsy ny olon-drehetra no hitia azy fa raha tsy andramanao dia tsy fantatrao.
Vantany vao vita ny fiofanana 20 minitra, dia hosoratana amin'ny medaly Apple Watch medaly ao amin'ny fizarana loka ny medaly ny toerana misy fanamby fanontana voafetra. Hanana ihany koa ireo stickers mifandraika amin'ity hetsika ity izay azonao zaraina amin'ny rindranasa hafatra sy ny hafa. Izahay dia milaza foana fa ny zava-dehibe eto dia ny fotoana ampiasainao amin'ny vatanao sy ny fahasalamanao mihoatra ny medaly na fanamby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Yoga Day Challenge izao dia misy
Izany no azonao atao amin'ny AirPlay sy macOS Monterey